13-jir Soomaali ah oo noqday qofkii ugu da’da yaraa ee UK ugu dhintay Covid-19. - NorSom News
13-jir Soomaali ah oo noqday qofkii ugu da’da yaraa ee UK ugu dhintay Covid-19.
Wiil 13 jir ah oo Soomaali ah oo laga helay coronavirus ayaa geeriyooday, sida ay sheegeen maamulka isbitaal ku yaalla magaalada London.
Waxay intaas ku dareen inuusan horay u qabin cudurro muuqday oo dhibaato ku ahaa caafimaadkiisa, wixii ka horreeyay maalintii Jimcada oo laga helay Covid-19.
Hal maalin ka hor xilligaas ayaa isbitaalka lasii dhigay, kaddib markii ay xaaladdiisa caafimaad isbaddashay. Qoyska Ismaaciil ayaa sheegay in wiilkooda ay isbitaalka geeyeen markii ay ku arkeen calaamadaha, xilligaasoo neefsashada ay dhibeysay.
Si aad ula socoto wararka NorSom News oo maqal iyo muuqaal ah, Riix halkan, kadibna Subcribe(Abonner) bogeena Youtebe-ka.
Previous articleFHI: 201 soomaali ah ayaa laga helay corona-virus.
Next articleWarbaahinta Norway oo maanta hadalheyso tirada soomaalida uu ku dhacay Corona-virus.